जब पूर्व सांसदले अस्पताल प्रमुखलाई एम्बुलेन्समा थुनेर जथाभावी गाली गरे... - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ जब पूर्व सांसदले अस्पताल प्रमुखलाई एम्बुलेन्समा थुनेर जथाभावी गाली गरे…
जब पूर्व सांसदले अस्पताल प्रमुखलाई एम्बुलेन्समा थुनेर जथाभावी गाली गरे…
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७८ साउन १४ गते, १३:५२ मा प्रकाशित
काठमाडौं–राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य चन्द्रबहादुर खड्काले आफ्नी आमाको उचारमा खटिएका चिकित्सकहरुलाई दुर्व्यवहार गरेका छन् ।
१३ साउनमा नेता खड्काकी आमाको उपचारको लागि अर्घखाँची अस्पतालमा लगिएको र थप उपचारका लागि काठमाडौं रेफर गर्ने क्रममा उपचारमा संलग्न अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. कपिल गौतम, डा. पुजा पन्थीलगायतलाई अपशब्द बोलेको अस्पतालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
रिफर गरेर बिरामीलाई एम्बुलेन्समा राख्न गएका निमित्त प्रमुख डा. गौतमलाई ‘यो डाक्टरको यहाँ काम छैन, यसलाई पनि काठमाडौं लैजानुपर्छ । बिरामीसँगै जान्छ’ भन्दै ढोका थुनिदिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । चिकित्सकहरुले बिरामीको अवस्था गम्भीर भएको हुँदा थप काठमाडौं लैजान उपयुक्त हुने सल्लाह दिएका थिए ।
तर, नेता खड्काले बिरामीलाई सार्ने क्रममा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘त हो होस् ? यहाँको ओजेटी, नर्स सबैको डाक्टर सबैको नाम लेखेर दे, मेरो बिरामीलाई केही तलमाथि परेमा सबै जिम्मेवार हुन्छौ ’ भन्दै धम्क्याएका थिए ।
अस्पतालका निमित्त प्रमुख र अर्घखाँची विकास समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भुषालले विज्ञप्ती जारी गरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरिएको दुर्व्यवहार भर्त्सना गरेका छन् । साथै दोषीमाथि कानुनअनुसार कारवाहीको माग समेत गरेका छन् ।
खड्का माओवादी केन्द्रकोतर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण भएर विभाजन भएसँगै उनी एमालेतर्फ लागेका थिए । माओवादी केन्द्रले उनलाई पार्टीबाट कारवाही गरी सांसदबाट निलम्बन गरेको थियो ।
ट्याग : #अर्घखाची अस्पताल, #एम्बुलेन्समा थुनेर जथाभावी गालि, #जथाभावी, #जथाभावी गाली गरे, #पुर्व सदस्य चन्द्र बहादुर खड्का